“Tụkwasị Jehova Obi, Na-emekwa Ihe Ọma”—Abụ Ọma 37:3
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Tụkwasị Jehova obi, na-emekwa ihe ọma . . . na-eme ihe n’ikwesị ntụkwasị obi.”—ỌMA 37:3.
ABỤ: 133, 63
OLEE IHE ANYỊ GA-AMỤTA GBASARA ỊTỤKWASỊ JEHOVA OBI N’AKA . . .
ndị ọzọ ji obi ha niile fee Jehova?
1. Olee ihe ndị mere ka otú Jehova si kee anyị pụọ iche?
JEHOVA kere ụmụ mmadụ otú pụrụ iche. O kere anyị otú anyị ga-enwe ike iche echiche, ka anyị nwee ike ịna-edozi nsogbu ndị bịaara anyị, nweekwa ike ime atụmatụ ihe anyị ga-eme n’ọdịnihu. (Ilu 2:11) O nyere anyị ikike imezu ihe ndị dị mma anyị bu n’obi ime. (Fil. 2:13) O nyekwara anyị akọnuche, ya bụ, ihe na-eme ka anyị mara ihe bụ́ ihe ọma na ihe ọjọọ. Akọnuche a na-enyere anyị aka anyị aghara ime ihe ọjọọ, nyekwara anyị aka imezi ihe anyị na-emetaghị.—Rom 2:15.
2. Olee ihe Jehova chọrọ ka anyị jiri ihe ndị o nyere anyị na-eme?
2 Jehova chọrọ ka anyị jiri ihe ndị a o nyere anyị mee ihe ndị ga-aba uru. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na ọ hụrụ anyị n’anya, marakwa na anyị ga-enwe obi ụtọ ma anyị jiri ihe ndị a o nyere anyị mee ihe bara uru. Jehova ejirila Baịbụl gwa anyị ọtụtụ ugboro ka anyị jiri ihe ndị a o nyere anyị mee ihe ga-aba uru. Dị ka ihe atụ, n’Akwụkwọ Nsọ Hibru, e kwuru, sị: “Atụmatụ onye dị uchu aghaghị iweta uru”; kwuokwa, sị: “Ihe niile ruru gị aka ime, jiri ike gị dum mee ha.” (Ilu 21:5; Ekli. 9:10) A gwara anyị n’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst, sị: “Ọ bụrụhaala na anyị nwere oge dị mma maka ya, ka anyị na-eme ihe ọma n’ebe mmadụ niile nọ,” gwakwa anyị, sị: “Dị ka onye ọ bụla natara onyinye, jirinụ ya na-ejere ibe unu ozi.” (Gal. 6:10; 1 Pita 4:10) Ihe ndị a gosiri na Jehova chọrọ ka anyị na-eme ihe ga-abara anyị na ndị ọzọ uru.
3. Olee ihe ụmụ mmadụ na-agaghị emeli n’onwe ha?
3 Jehova makwa na e nwere ihe ndị ụmụ mmadụ na-agaghị emeli. Anyị agaghị ejili aka anyị ewepụ ezughị okè, mmehie, na ọnwụ. E nyeghịkwa anyị ikike ịtụrụ ndị ọzọ ụka, n’ihi na onye ọ bụla nwere ikike iji aka ya ekpebi ihe ọ ga-eme. (1 Eze 8:46) N’agbanyeghịkwa otú anyị maruru n’ihe, anyị dị ka ụmụaka ma e jiri anyị tụnyere Chineke.—Aịza. 55:9.
Mgbe nsogbu bịaara gị, “tụkwasị Jehova obi, na-emekwa ihe ọma”
4 Anyị kwesịrị ikwe ka Jehova na-eduzi anyị n’ihe niile anyị na-eme ma tụkwasị ya obi na ọ ga na-akwado anyị ma na-emere anyị ihe ndị anyị na-agaghị emeliri onwe anyị. Mana, anyị kwesịkwara ịna-eme ihe anyị nwere ike ime iji dozie nsogbu anyị na iji nyere ndị ọzọ aka. (Gụọ Abụ Ọma 37:3.) N’eziokwu, anyị kwesịrị ‘ịtụkwasị Jehova obi, na-emekwa ihe ọma’; kwesịkwa ịna-eme ihe “n’ikwesị ntụkwasị obi.” Ka anyị tụlee ihe anyị ga-amụta n’aka Noa, Devid, nakwa ndị ọzọ ji obi ha niile fee Chineke, bụ́ ndị tụkwasịrị Jehova obi ma mee ihe ndị ha kwesịrị ime. Anyị ga-ahụ ihe ndị ha ga-emeli na ihe ndị ha na-agaghị emeli, hụkwa otú ha si mee ndị nke ha ga-emeli.
MGBE IHE ỌJỌỌ GBARA ANYỊ GBURUGBURU
5. Kọwaa ụdị ọnọdụ Noa nọ na ya.
5 N’oge Noa, ụwa ‘jupụtara n’ime ihe ike’ na omume rụrụ arụ. (Jen. 6:4, 9-13) Ọ ma na Chineke ga-emecha bibie ụwa ọjọọ ahụ. N’agbanyeghị ya, ọ ga-abụ na ihe ọjọọ ndị na-eme n’oge ahụ nyere ya nsogbu n’obi. O doro Noa anya na e nwere ihe ndị ọ na-agaghị emeli gbasara ihe ọjọọ ndị na-emenụ, nweekwa ndị nke ọ ga-emeli.
Mgbe a na-ekweghị ege gị ntị n’ozi ọma (A ga-akọwa ya na paragraf nke 6-9)
6, 7. (a) Gịnị ka Noa na-agaghị emeli? (b) Olee otú ọnọndụ anyị na nke Noa si yie?
6 Ihe Noa na-agaghị emeli: N’agbanyeghị na Noa ji obi ya niile kwusaa ozi ịdọ aka ná ntị Jehova dunyere ya, ọ gaghị amanyeli ndị ajọ mmadụ ka ha nabata ozi ahụ, ọ gaghịkwa emeli ka Iju Mmiri ahụ bịa ngwa ngwa. Noa kwesịrị ịtụkwasị Jehova obi na ọ ga-emezu ihe o kwuru, ya bụ, na ọ ga-ebibi ihe ọjọọ nakwa na ọ ga-eme ya mgbe oge ya ruru.—Jen. 6:17.
7 Anyịnwa bikwa n’ụwa ihe ọjọọ juru, anyị makwa na Jehova ekwuola na ọ ga-ebibi ya. (1 Jọn 2:17) Ka ọ dịgodị, anyị agaghị amanyeli ndị mmadụ ka ha nabata ‘ozi ọma Alaeze Chineke.’ O nweghịkwa ihe anyị ga-emeli ka ụbọchị “oké mkpagbu” bịa ngwa ngwa. (Mat. 24:14, 21) Anyị kwesịrị inwe okwukwe siri ike ka Noa, obi esiekwa anyị ike na Chineke ga-eme ihe n’oge na-adịghị anya. (Ọma 37:10, 11) Obi siri anyị ike na Jehova agaghị ekwe ka ụwa ọjọọ a jiri otu ụbọchị gafee mgbe o bu n’obi ibibi ya.—Hab. 2:3.
8. Olee otú Noa si lekwasị anya n’ihe ndị ọ ga-emeli? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
8 Ihe Noa ga-emeli: Noa ekweghị ka ihe ndị ọ na-agaghị emeli mee ka ike gwụ ya. O lekwasịrị anya ná ndị nke ọ ga-emeli. Ebe Noa bụ “onye na-ekwusa ezi omume,” o ji obi ya niile kwusaa ozi ịdọ aka ná ntị Chineke dunyere ya. (2 Pita 2:5) O doro anya na ozi ọma a o kwusara mere ka okwukwe ya sie ike. E wezụga ozi ọma o kwusara, o mere ihe niile o nwere ike ime iji rụọ ụgbọ Chineke gwara ya rụọ.—Gụọ Ndị Hibru 11:7.
9. Olee otú anyị ga-esi eme ka Noa?
9 Anyị na-agbalị ‘inwe ọtụtụ ihe anyị na-arụ n’ọrụ Onyenwe anyị,’ otú ahụ Noa mere. (1 Kọr. 15:58) Ihe só n’ọrụ ndị ahụ bụ ịrụ ebe ndị anyị na-anọ efe Chineke, iso na-enye aka ná mgbakọ anyị dị iche iche, ịna-enye aka n’ọrụ a na-arụ n’alaka ụlọ ọrụ ma ọ bụ n’ọfis ndị nsụgharị. Ma, nke kachanụ bụ na anyị na-ekwusa ọzi ọma mgbe niile, ebe anyị ma na ọrụ a na-eme ka olileanya anyị nwere na ihe ga-adị mma n’ọdịnihu sikwuo ike. Otu nwanna nwaanyị ji obi ya niile na-ejere Chineke ozi kwuru, sị: “Mgbe ị na-agwa ndị ọzọ banyere ngọzi nke Alaeze Chineke, ị ga-chọpụta na ndị na-ege gị ntị enwetụghị olileanya, nakwa na ha na-ele nsogbu ha anya dị ka nke na-adịgide adịgide.” N’eziokwu, ikwusa ozi ọma na-eme ka obi sikwuo anyị ike na ihe ga-adị mma n’ọdịnihu, meekwa ka anyị kpebisikwuo ike ịghara ịda mba n’ọsọ ndụ anyị na-agba.—1 Kọr. 9:24.
MGBE ANYỊ MERE MMEHIE
10. Kọwaa nsogbu ndị bịaara Devid.
10 Jehova kwuru na Devid bụ “nwoke obi [ya] nabatara.” (Ọrụ 13:22) Ihe e ji mara Devid bụ na o ji obi ya niile eme uche Chineke. N’agbanyeghị ya, o nwere mgbe o mere mmehie dị oké njọ. Ya na Bat-shiba kwara iko. O medịrị nke ka njọ. Ọ kpara nkata ka e gbuo di Bat-shiba bụ́ Yuraya n’ọgbọ agha ebe ọ na-achọ izochi ihe o mere. Devid nyedịrị Yuraya akwụkwọ ozi o ji kwuo ka e gbuo ya, ka o jiri aka ya nye ya onyeisi agha. (2 Sam. 11:1-21) Mmehie Devid mechara gbaa n’anwụ. (Mak 4:22) Gịnị ka Devid mere mgbe mmehie ya pụtara ìhè?
Mgbe mmehie ndị i mere n’oge gara aga na-enye gị nsogbu n’obi (A ga-akọwa ya na paragraf nke 11-14)
11, 12. (a) Gịnị ka Devid na-agaghị emeli gbasara mmehie ndị ahụ o mere? (b) Gịnịkwa ka Jehova ga-emere anyị ma ọ bụrụ na anyị mere mmehie dị oké njọ ma mechaa chegharịa?
11 Ihe Devid na-agaghị emeli: Devid agaghị emezili ihe o mehiere, ọ gaghịkwa agbanahụli nsogbu ndị si na ya pụta. Nke bụ́ eziokwu bụ na ụfọdụ nsogbu ihe a o mere kpataara ya ga-adịgide ruo mgbe ọ ga-anwụ. (2 Sam. 12:10-12, 14) N’ihi ya, o kwesịrị inwe okwukwe. Obi kwesịkwara isi ya ike na ebe ọ bụ na o chegharịala n’eziokwu, Jehova ga-agbaghara ya, nyekwara ya aka idi nsogbu ihe ndị o mere kpataara ya.
12 Anyị niile na-emehiecha n’ihi na anyị ezughị okè. E nwere mmehie ụfọdụ ndị dị oké njọ karịa ibe ha. Anyị agaghịkwa emezili ụfọdụ n’ime mmehie ndị ahụ. Naanị ihe anyị ga-eme bụ idiwe nsogbu ndị si na ha pụta. (Gal. 6:7) Ma, obi siri anyị ike na ọ bụrụhaala na anyị echegharịa, Jehova ga-emezu nkwa o kwere anyị na ọ ga-enyere anyị aka ná nsogbu bịaara anyị, a sịgodị na ọ bụ nke anyị kpataara onwe anyị.—Gụọ Aịzaya 1:18, 19; Ọrụ Ndịozi 3:19.
13. Olee ihe Devid mere ka ya na Jehova dịghachị ná mma?
13 Ihe Devid ga-emeli: Devid kwere ka Jehova nyere ya aka ka ya na ya dịkwa ná mma. Otú o si mee ya bụ na ọ nabatara ihe onye amụma Jehova, bụ́ Netan, gwara ya. (2 Sam. 12:13) Ihe ọzọ Devid mere bụ na o kpere ekpere, kwupụtara Chineke mmehie ya, gosikwa n’eziokwu na ọ chọrọ ka ya na Jehova dịghachi ná mma. (Ọma 51:1-17) Devid ekweghị ka obi na-ama ya ikpe mee ka ike gwụ ya. Kama, ọ mụtara ihe n’ihe o mejọrọ. N’eziokwu, o meghịkwa mmehie ndị ahụ dị oké njọ ọzọ. Ya na Chineke dịgidere ná mma ruo mgbe ọ nwụrụ ka ọtụtụ afọ gachara. Jehova ka na-echetakwa ya ka onye guzosiri ike n’ebe ọ nọ.—Hib. 11:32-34.
14. Gịnị ka anyị na-amụta n’aka Devid?
14 Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’aka Devid? Ọ bụrụ na anyị emee mmehie dị oké njọ, anyị kwesịrị iji obi anyị niile chegharịa, rịọkwa Jehova ka ọ gbaghara anyị. Anyị ga-ekwupụtarịrị mmehie anyị. (1 Jọn 1:9) Anyị kwesịkwara ịgakwuru ndị okenye, bụ́ ndị ga-enyere anyị aka ka anyị na Jehova dịkwa ná mma. (Gụọ Jems 5:14-16.) Ọ bụrụ na anyị anabata aka Jehova na-enyere anyị, anyị na-egosi na obi siri anyị ike na ọ ga-agwọ anyị otú o kwere ná nkwa, gbagharakwa anyị. N’ihi ya, ka anyị gbaa mbọ mụta ihe n’ihe mere anyị, nọgide na-ejere Jehova ozi, nweekwa obi ike na ihe ga-adịrị anyị mma ọdinihu.—Hib. 12:12, 13.
IHE ANYỊ NA-AMỤTA N’AKA NDỊ ỌZỌ
Mgbe ọrịa bịara (A ga-akọwa ya na paragraf nke 15)
15. Olee ihe anyị mụtara n’aka Hana?
15 I nwere ike icheta ndị ọzọ ji obi ha niile fee Chineke n’oge gara aga, bụ́ ndị tụkwasịrị Jehova obi ma mee ihe ndị ha ga-emeli. Dị ka ihe atụ, Hana bụ nwaanyị aga. O nweghịkwa ihe ọ ga-emeli gbasara ya. Ma, obi siri ya ike na Jehova ga-akasi ya obi. N’ihi ya, ọ nọgidere na-efe Chineke n’ụlọikwuu, na-akọkwara ya mkpa ya n’ekpere. (1 Sam. 1:9-11) Ọ̀ bụ na anyị ekwesịghị ịṅomi Hana? Ọ bụrụ na anyị na-arịa ọrịa ma ọ bụ nwee nsogbu ndị anyị na-agaghị emeli ihe ọ bụla banyere ha, anyị na-akọrọ ya Jehova, ebe anyị ma na ọ na-eche banyere anyị. (1 Pita 5:6, 7) Anyị na-emekwa ihe niile anyị nwere ike ime ka anyị nwee ike ina-aga ọmụmụ ihe anyị, sorokwa na-eme ihe ndị ọzọ a na-eme ná nzukọ Jehova, n’ihi na ha na-abara anyị uru.—Hib. 10:24, 25.
Mgbe nwa gị kpafuru (A ga-akọwa ya na paragraf nke 16)
16. Gịnị ka ndị nne na nna nwere ike ịmụta n’aka Samuel?
16 Oleekwanụ maka ndị nne na nna ji obi ha niile na-efe Chineke, ma ụmụ ha ahapụ ọgbakọ? Samuel onye amụma agaghị amanyeli ụmụ ya bụ́ ndị dimkpa ka ha na-erubere Chineke isi. (1 Sam. 8:1-3) Ọ hapụụrụ Jehova okwu ahụ. Ma, Samuel ga-erubereli Nna ya nke eluigwe bụ́ Jehova isi ma na-eme ihe ọ chọrọ. (Ilu 27:11) Taa, ụdị ihe a emeela ọtụtụ ndị nne na nna ji obi ha niile na-efe Chineke. Obi siri ha ike na Jehova na-achọ ndị mmehie chegharịrị echegharị ka ọ nabata ha, otú ahụ nna nwa mmefu mere n’akụkọ nwa mmefu ahụ. (Luk 15:20) Ka ọ dịgodi, ndị nne na nna ahụ na-agbasị mbọ ike ka hanwa na-erubere Jehova isi, na-atụkwa anya na ụmụ ha ga-amụta ihe n’aka ha, lọghachikwute Jehova.
Mgbe ihe na-esiri gị ike (A ga-akọwa ya na paragraf nke 17)
17. Olee ihe anyị na-amụta n’akụkọ gbasara otu nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye?
17 Cheekwa banyere otu nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye n’oge Jizọs. (Gụọ Luk 21:1-4) E nweghị ihe ọ ga-emeli gbasara nrụrụaka na arụrụala juru n’ụlọ nsọ. (Mat. 21:12, 13) E nweghịkwa ezigbo ihe ọ ga-emeli ka ọ gharazie ịbụ ogbenye. Ma, o ji obi ya niile nye “obere mkpụrụ ego abụọ,” nke bụ́ “ihe niile o nwere o ji ebi ndụ.” Nwaanyị a na-atụ egwu Jehova gosiri na o ji obi ya niile tụkwasị Jehova obi. Ọ makwa na ya buru ụzọ na-eme ihe ndị gbasara ofufe Chineke, Jehova ga na-enye ya ihe ndị na-akpa ya. Okwukwe nwaanyị a nwere n’ebe Jehova nọ mere ka ọ kwado ihe ndị gbasara ofufe Chineke n’oge ahụ. Obi sikwara anyịnwa ike na ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ na-achọ Alaeze Chineke, Jehova ga na-enye anyị ihe ndị na-akpa anyị.—Mat. 6:33.
18. Nye ihe atụ nke otu nwanna lere ihe anya otú kwesịrị ekwesị.
18 Ọtụtụ ndị anyị na ha na-efekọ Chineke n’oge a egosikwala na ha tụkwasịrị Jehova obi, na-eme ihe ndị ha ga-emeli, ma wepụ obi ha ná ndị nke ha na-agaghị emeli. Chegodị banyere Nwanna Malcolm, bụ́ onye jegideere Jehova ozi ruo mgbe ọ nwụrụ n’afọ 2015. Ọtụtụ nsogbu bịaara ya na nwunye ya ọtụtụ afọ ha ji jeere Jehova ozi. O kwuru, sị: “Anyị amaghị ihe ga-eme anyị echi. Mgbe ụfọdụ, naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ikwu ihe anyị chere. Ma Jehova na-agọzi ndị tụkwasịrị ya obi.” O nyeziri ndụmọdụ, sị: “Na-ekpe ekpere ka Jehova nyere gị aka ịna-eme nke ọma n’ozi ya. Na-eche banyere ihe ndị ị ga-emeli n’ozi Jehova, ọ bụghị ihe ndị ị na-agaghị emeli.” *
19. (a) Gịnị mere isiokwu afọ 2017 ji daba adaba? (b) Olee otú ị ga-esi eme ihe e kwuru n’isiokwu afọ 2017 ná ndụ gị?
19 Ka ụwa ochie a “na-ajọwanye njọ,” anyị ga na-atụ anya na nsogbu tara akpụ ga na-abịara anyị. (2 Tim. 3:1, 13) N’ihi ya, ọ dị mkpa ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ ka anyị ghara ikwe ka nsogbu ndị na-abịara anyị mee ka ike gwụ anyị. Kama, anyị kwesịrị ịgbasị mbọ ike tụkwasị Jehova obi, ma na-eme ihe ndị anyị ga-emeli. Ọ bụ ya mere isiokwu afọ 2017 ji daba nnọọ adaba. Isiokwu ahụ sịrị: “Tụkwasị Jehova obi, na-emekwa ihe ọma.”—Ọma 37:3.
Isiokwu afọ 2017 bụ: “Tụkwasị Jehova obi, na-emekwa ihe ọma.”—Abụ Ọma 37:3
^ para. 18 Gụọ Ụlọ Nche, Ọktoba 15, 2013, peeji nke 17-20.